ဒီရာသီ စီးရီးအေပြိုင်ပွဲ သွင်းဂိုးအများဆုံးဆုအတွက် တိုက်ပွဲက ပိုပြင်းထန်လာပြီ
3 Aug 2018 . 6:45 PM
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ စီးရီးအေ Serie A ပြိုင်ပွဲကတော့ ရာသီတောင် မစသေးဘူး၊ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိနေပြီ။ အဓိက အချက်က ရီးယဲလ်အသင်းကနေ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ကြောင့်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး သူရောက်လာတဲ့အတွက် ပြိုင်ပွဲအပေါ် ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်လာခဲ့သလို နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီမှာ ဘယ်ကစားသမားက သွင်းဂိုးအများဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာပါပဲ။ အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေအတွင်း စီးရီးအေ သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားတွေကို ပြန်ကြည့်ရင် အရင့်အရင်ကလိုမျိုး တစ်ယောက်တည်းက ဂိုးတွေ အများကြီးသွင်းပြီး သွင်းဂိုးအများဆုံးဆု ရခဲ့တာ သိပ်မရှိတော့ဘူး။ နောက်ဆုံး(၄)ရာသီမှာ သွင်းဂိုးအများဆုံးဆုကို ပူးတွဲရခဲ့တာ (၂)ရာသီရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၄-၁၅ မှာ လူကာတိုနီ Luca Toni ၊ အီကာဒီ Icardi (၂၂ဂိုးစီ)၊ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ အီမိုဘီလီ Immobile ၊ အီကာဒီ Icardi (၂၉ဂိုးစီ)တို့ဖြစ်ပါတယ်။
နဂိုတည်းကမှ သွင်းဂိုးအများဆုံးအတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်နေတဲ့ စီးရီအေပြိုင်ပွဲကို ရီးယဲလ်အသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို ရောက်လာချိန်မှာ မီးစာပိုမြှင့်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်။ အခုအချိန်မှာ ပရိသတ်တွေအတွက် စီးရီးအေမှာ ဘယ်သူဗိုလ်စွဲနိုင်မလဲဆိုတာထက် သွင်းဂိုးအများဆုံးက ဘယ်သူများဖြစ်မလဲဆိုတာကို ပိုစိတ်ဝင်စားနေကြပြီ။ အဲဒီတော့ သွင်းဂိုးအများဆုံးဆုအတွက် ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကစားသမားတွေကို ကြိုတင်ရင်ခုန်ကြည့်ချင်ပါတယ် . . . .
စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo – ဂျူဗင်တပ်စ်(ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ လိဂ်သွင်းဂိုး-၂၆ဂိုး)
အသက်(၃၃)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် ကစားအားရော၊ ကြံ့ခိုင်မှုအပိုင်းမှာပါ အကောင်းဆုံးအနေထားဖြစ်နေတာကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဒီရာသီ စီးရီးအေပြိုင်ပွဲရဲ့ သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားဖြစ်လာဖို့ ထိပ်ဆုံးက ရေပန်းစားနေတယ်။ ရီးယဲလ် ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက်လုံး တစ်ရာသီကို အနည်းဆုံးဂိုး(၄၀)လောက်အထိ သွင်းယူခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို သူ့ရဲ့Goal Scoring Record ကို အီတလီမြေမှာလည်း ဆက်ထိန်းထားနိုင်မလား . .။
ဟီဂွါအင် Higuain – အေစီမီလန် (ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ လိဂ်သွင်းဂိုး – ၁၆ဂိုး)
‘တစ်ဂူတည်းမှာ ခြင်္သေ့နှစ်ကောင် မအောင်းဘူး’ဆိုတဲ့အတိုင်း ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို စီရော်နယ်လ်ဒို ရောက်လာချိန်မှာ ဟီဂွါအင်က အေစီမီလန်ဆီ ချက်ချင်းပြောင်းတော့တာပဲ။ တစ်သင်းတည်းကစားရင်လည်း ဒီနှစ်ယောက်ကြားမှာ ကြိတ်ပြီး Compete ဖြစ်နေမယ့်အတူတူ ပြိုင်ဘက်အဖြစ် ရင်ဆိုင်ရတော့ ပိုကောင်းသွားတာပေ့ါ။ ဟီဂွါအင်ဟာ နာပိုလီကစားသမားဘ၀ ၂၀၁၅-၁၆ ရာသီတုန်းက (၃၆)ဂိုးအထိ သွင်းခဲ့ပြီး ၁၉၂၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း စံချိန်တင်သွင်းဂိုးပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အီမိုဘီလီ Immobile – လာဇီယို (ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ လိဂ်သွင်းဂိုး – ၂၉ဂိုး)
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက (၂၉)ဂိုးသွင်းပြီး အင်တာမီလန်တိုက်စစ်မှူး အီကာဒီနဲ့အတူ ပူးတွဲသွင်းဂိုးအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အီမိုဘီလီကိုလည်း ဒီစာရင်းထဲမှာ ထည့်သွင်းရမယ်။ လာဇီယိုအသင်းရဲ့ Goal Machine လို့ တင်စားရမယ့် အီမိုဘီလီက စီရော်နယ်လ်ဒို၊ ဟီဂွါအင်တို့ကို ကောင်းကောင်းစိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိသူပါ။
အီကာဒီ Icardi – အင်တာမီလန် (ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ လိဂ်သွင်းဂိုး -၂၉ဂိုး)
ဒီရာသီ အင်တာမီလန်အသင်း ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရခဲ့တာဟာ အီကာဒီရဲ့ သွင်းဂိုးတွေက အဓိက ကျခဲ့တယ်။ ဒဏ်ရာပြဿနာသာမရှိရင် အီကာဒီအတွက် တစ်ဂိုးရဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလူတွေကတော့ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ စီးရီးအေသွင်းဂိုးအများဆုံးဆုအတွက် ထိပ်ဆုံးက ရေပန်းစားနေတဲ့သူတွေပါ။ သူတို့နဲ့အတူ ဂျက်ကို Dzeko (ရိုးမား)၊ ဘယ်လော့တီ Belotti (တိုရီနို)၊ မာတင်စ် Mertens (နာပိုလီ)တို့ကလည်း စီးရီးအေသွင်းဂိုးအများဆုံးဆုအတွက် အပြိုင်ရေပန်းစားနေသူပါ။ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း ဒီလူစာရင်းထဲက ဘယ်ကစားသမားဟာ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီရဲ့ သွင်းဂိုးအများဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းပေးကြလား . . .
ဒီရာသီ စီးရီးအပွေိုငျပှဲ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးဆုအတှကျ တိုကျပှဲက ပိုပွငျးထနျလာပွီ
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ စီးရီးအေ Serie A ပွိုငျပှဲကတော့ ရာသီတောငျ မစသေးဘူး၊ ပရိသတျတှရေဲ့ စိတျဝငျစားမှုကို ရရှိနပွေီ။ အဓိက အခကျြက ရီးယဲလျအသငျးကနေ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဆီ ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ကွောငျ့လို့ ဆိုရမှာဖွဈပွီး သူရောကျလာတဲ့အတှကျ ပွိုငျပှဲအပျေါ ပရိသတျစိတျဝငျစားမှု မွငျ့တကျလာခဲ့သလို နောကျထပျစိတျဝငျစားစရာကောငျးတာက ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီမှာ ဘယျကစားသမားက သှငျးဂိုးအမြားဆုံးဖွဈမလဲဆိုတာပါပဲ။ အခုနောကျပိုငျးနှဈတှအေတှငျး စီးရီးအေ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမားတှကေို ပွနျကွညျ့ရငျ အရငျ့အရငျကလိုမြိုး တဈယောကျတညျးက ဂိုးတှေ အမြားကွီးသှငျးပွီး သှငျးဂိုးအမြားဆုံးဆု ရခဲ့တာ သိပျမရှိတော့ဘူး။ နောကျဆုံး(၄)ရာသီမှာ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးဆုကို ပူးတှဲရခဲ့တာ (၂)ရာသီရှိခဲ့ပွီး ၂၀၁၄-၁၅ မှာ လူကာတိုနီ Luca Toni ၊ အီကာဒီ Icardi (၂၂ဂိုးစီ)၊ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ အီမိုဘီလီ Immobile ၊ အီကာဒီ Icardi (၂၉ဂိုးစီ)တို့ဖွဈပါတယျ။
နဂိုတညျးကမှ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးအတှကျ ပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးထနျနတေဲ့ စီးရီအပွေိုငျပှဲကို ရီးယဲလျအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမား စီရျောနယျလျဒို ရောကျလာခြိနျမှာ မီးစာပိုမွှငျ့လိုကျသလိုဖွဈသှားတယျ။ အခုအခြိနျမှာ ပရိသတျတှအေတှကျ စီးရီးအမှော ဘယျသူဗိုလျစှဲနိုငျမလဲဆိုတာထကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးက ဘယျသူမြားဖွဈမလဲဆိုတာကို ပိုစိတျဝငျစားနကွေပွီ။ အဲဒီတော့ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးဆုအတှကျ ပွိုငျဘကျတှဖွေဈလာနိုငျတဲ့ ကစားသမားတှကေို ကွိုတငျရငျခုနျကွညျ့ခငျြပါတယျ . . . .
စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo – ဂြူဗငျတပျဈ(ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီ လိဂျသှငျးဂိုး-၂၆ဂိုး)
အသကျ(၃၃)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈပမေယျ့ ကစားအားရော၊ ကွံ့ခိုငျမှုအပိုငျးမှာပါ အကောငျးဆုံးအနထေားဖွဈနတောကွောငျ့ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ဒီရာသီ စီးရီးအပွေိုငျပှဲရဲ့ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမားဖွဈလာဖို့ ထိပျဆုံးက ရပေနျးစားနတေယျ။ ရီးယဲလျ ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျလုံး တဈရာသီကို အနညျးဆုံးဂိုး(၄၀)လောကျအထိ သှငျးယူခဲ့တဲ့ စီရျောနယျလျဒို သူ့ရဲ့Goal Scoring Record ကို အီတလီမွမှောလညျး ဆကျထိနျးထားနိုငျမလား . .။
ဟီဂှါအငျ Higuain – အစေီမီလနျ (ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီ လိဂျသှငျးဂိုး – ၁၆ဂိုး)
‘တဈဂူတညျးမှာ ခွင်ျသနှေ့ဈကောငျ မအောငျးဘူး’ဆိုတဲ့အတိုငျး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကို စီရျောနယျလျဒို ရောကျလာခြိနျမှာ ဟီဂှါအငျက အစေီမီလနျဆီ ခကျြခငျြးပွောငျးတော့တာပဲ။ တဈသငျးတညျးကစားရငျလညျး ဒီနှဈယောကျကွားမှာ ကွိတျပွီး Compete ဖွဈနမေယျ့အတူတူ ပွိုငျဘကျအဖွဈ ရငျဆိုငျရတော့ ပိုကောငျးသှားတာပေ့ါ။ ဟီဂှါအငျဟာ နာပိုလီကစားသမားဘ၀ ၂၀၁၅-၁၆ ရာသီတုနျးက (၃၆)ဂိုးအထိ သှငျးခဲ့ပွီး ၁၉၂၉ ခုနှဈနောကျပိုငျး စံခြိနျတငျသှငျးဂိုးပိုငျရှငျဖွဈခဲ့တယျ။
အီမိုဘီလီ Immobile – လာဇီယို (ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီ လိဂျသှငျးဂိုး – ၂၉ဂိုး)
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက (၂၉)ဂိုးသှငျးပွီး အငျတာမီလနျတိုကျစဈမှူး အီကာဒီနဲ့အတူ ပူးတှဲသှငျးဂိုးအမြားဆုံးဖွဈခဲ့တဲ့ အီမိုဘီလီကိုလညျး ဒီစာရငျးထဲမှာ ထညျ့သှငျးရမယျ။ လာဇီယိုအသငျးရဲ့ Goal Machine လို့ တငျစားရမယျ့ အီမိုဘီလီက စီရျောနယျလျဒို၊ ဟီဂှါအငျတို့ကို ကောငျးကောငျးစိနျချေါနိုငျစှမျးရှိသူပါ။
အီကာဒီ Icardi – အငျတာမီလနျ (ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီ လိဂျသှငျးဂိုး -၂၉ဂိုး)
ဒီရာသီ အငျတာမီလနျအသငျး ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ရခဲ့တာဟာ အီကာဒီရဲ့ သှငျးဂိုးတှကေ အဓိက ကခြဲ့တယျ။ ဒဏျရာပွဿနာသာမရှိရငျ အီကာဒီအတှကျ တဈဂိုးရဖို့ဆိုတာ ခကျခဲတဲ့အရာ မဟုတျပါဘူး။
ဒီလူတှကေတော့ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ စီးရီးအသှေငျးဂိုးအမြားဆုံးဆုအတှကျ ထိပျဆုံးက ရပေနျးစားနတေဲ့သူတှပေါ။ သူတို့နဲ့အတူ ဂကျြကို Dzeko (ရိုးမား)၊ ဘယျလော့တီ Belotti (တိုရီနို)၊ မာတငျဈ Mertens (နာပိုလီ)တို့ကလညျး စီးရီးအသှေငျးဂိုးအမြားဆုံးဆုအတှကျ အပွိုငျရပေနျးစားနသေူပါ။ ပရိသတျတှအေနနေဲ့လညျး ဒီလူစာရငျးထဲက ဘယျကစားသမားဟာ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီရဲ့ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးဖွဈမလဲဆိုတာ ခနျ့မှနျးပေးကွလား . . .